Munamato weGwayana Nyoro Nyoro? Kupingudzwa, Kukunda uye Kusunga [Kudiwa]
Munamato wegwayana nyoro nyoro. Gwayana diki yaive mhuka yakashandiswa naMwari kuchenesa zvivi zvepasirese. Ndokusaka munamato wegwayana nyoro Icho chiitiko chekutenda chakavakirwa pamagwaro matsvene.
Munamato uyu unoitwa nezvakawanda zvinangwa zvichienderana nezvinodiwa zvauinazvo.
Nekudaro, chinangwa chinonyanya kufarirwa ndechekuremedza munhu seGwayana chiratidzo chehunyoro.
Iyo inomiririrwa nehunhu hwemhuka iyo, yakarara padumbu rayo, inoratidza rugare rwekuvapo.
Kana zvikumbirwa, kunongedzerwa kunoitirwa hunhu, kunyanya kukumbira kuti uyu ave munhu watiri kunyengeterera.
1 Munamato wegwayana nyoro
1.1 Munamato wegwayana nyoro kune mudiwa
1.2 Namata munyoro gwayana kuti tishe, kutonga uye kusunga
1.3 Kutonga vavengi
1.4 Munamato wegwayana nyoro remukuru
Kunyangwe gwayana rakapfava rinomiririrwa nemhuka, ichi chifananidzo chitsvene chinoshandiswa nevatendi kutungamira minamato yavo.
Reference inoitirwa kune gwayana dzvene muBhaibheri, kunyanya mu bhuku revhangeri Sekureva kwaJohane Mutsvene, saka hachisi chinhu chinoshamisira padzidziso dzechiKristu.
Inoratidzika iine aura iri pamusoro wako musoro uyo anomiririra utsvene; Anobata muchinjikwa unomiririra chibayiro chaakaita kuti aponese vanhu uyezve, mureza chena unoonekwa sechiratidzo cherunyararo chinogona kuvonekwa mumashure.
Ipendi iyo inoratidza kudzikama, rugare uye unyoro.
Munamato wegwayana nyoro kune mudiwa
Ini ndinokushongedza (zita remunhu waunoda kuti tita) muzita raJesu, Maria naJoseph.
Nemashoko aya ndinokufungidzira zvakare… kuitira kuti uuye kwandiri segwayana nyoro uye uzere nerudo uye hanya kwandiri, chisikwa chaMwari, ndinoda kuti iwe undifunge chete uye uzviite zvizere nerudo.
Ini ... (zita rako) rinokufungidzira, murume wangu (kana mukadzi).
Nezita remweya wekutonga, ini ... ndinodzora pfungwa dzako shanu, kutonga kwako, kufunga kwako, uye kuda kwako: kuitira kuti iwe ... urambe uchitongwa-a, ramba wakapfava-pamakumbo angu uye wakasungwa-kwandiri zvachose, izvo zviripo sapamangwana.
Kuti kana ini ... ndomuona iye ... (kana iye) anondiona. Kana ini ... ndazvinzwa iye ... (kana iye) anondinzwa. Pandino ... kumutarisa iye ... (kana iye) anotarisa kwandiri. Pandino ... kumubata iye ... (kana iye) anondibata.
Uye kana ini ... ndogomera iye ... (kana iye) anogomera.
Saka pfungwa dzako shanu, pfungwa dzako, kunzwa uye moyo, dzichasungirwa kwandiri nekusingaperi mumufungo mumwechete. NaMwari ndinozvikumbira uye nemhando chaiyo yandinoda. Ameni
Kana gwayana nyoro richinamatwa kumudiwa, unyoro hwake hunova simba nekuti hapana mumwe ari nani kupfuura iye kutibatsira kutichengetedza rugare rwatinowanzo kurasikirwa nekuda kwemamiriro atisingakwanise kudzora.
Mune rudo, mazhinji eaya mamiriro akaomarara anoitika.
Mudiwa anogona kugara kuzvibata nenzira isiri yenguva dzose y izvo zvinoba rugare rwepfungwa. Munamato une simba uye mune aya mamiriro ezvinhu tinogona kuubata.
Masimba akashata anotizirawo kubva pamba panogara gwayana muminamato yezuva nezuva uye kana paine mhuri yese zvadaro zviri nani.
Namata munyoro gwayana kuti tishe, kutonga uye kusunga
Win, kuhwina, kuhwina.
Jesu Kristu ndiye anokunda. Sezvo ichi chiri chokwadi chikuru, ini ndinokunda ……. mwoyo we ……………., unininipisa segwayana unouya kutsoka dzangu, apo Jesu Kirisito akaenda kumuchinjikwa.
Gwayana nyoro riri paaritari, ukunde vavengi vangu vanondirwisa; dai moyo wangu wakavezwa maari, saJesu Kristu, uye akatuma Mutsvene Razaro, rufu Akakunda, sezvo ndichifanira kukunda muvengi uyu anondituka …… .. Nemaviri ndinokutarisa, nhatu ndinokubata, neropa raJesu Kristu moyo wangu unokuvhuna.
Ndiri kuona muvengi wangu achiuya akavhara meso uye maoko asinganeti.
Ropa raJesu Kristu rinondibvunza, uye handisi kuripa. Ndinokukumbira, ishe mukuru, kuti unondiunza ku ……………., Kuti iwe uuye nazvo kwandiri, uzvipe patsoka dzangu, wakundwa uye uodzwa mwoyo: une simba rekukunda.
Kana chimwe chinhu dhiabhori edza kundirwisa, hongu a Kururamisira anosiya, haatunde; kana akaisa vadziviriri, vese vacharamba. Jesu Kristu, uchave neni segwayana, uye paunotarisa kuvapo kwangu, munhu wese achaziya.
Uyu munyoro munyoro wegwayana munamato wekudzora, kutonga uye kusunga zvine simba kwazvo!
Munamato uyu unofanirwa kuitirwa nemutoro wakazara kure nesu pfungwa dzakaipa uye neudyire
Kukumbira kugona kutonga uye kusunga munhu hachisi chiito choudyire asi cherudo nekuti nguva zhinji pfungwa dzemumwe munhu hadzina kujeka uye iko kuno kuti munamato uyu unova chombo chedu chete uye chakasimba kwazvo.
Uyezve, zvinoshanda kune vaviri chete asi kune chero imwe mamiriro ezvinhu atinofanira kutora kutonga kuti zvinhu zvirege kudzorwa.
Nekudaro, chinhu chakasimba kwazvo mune iyi kana mimwe minyengetero yose iko kutenda kwavakaitwa, hapana munamato unoitwa nekutenda usingawane mhinduro.
Hwakanaka hunyoro gwayana raunowana paatari, ndibatsire kutonga nekukunda vavengi vese vanondirwisa, zvinosimbisa moyo wangu muna iye, sekuisa muviri wedu mudiwa Jesu Kristu, sekuraira kuna Mutsvene Razaro uyo akakunda, sekuda kwangu Ini ndinokunda muvengi wangu mutengesi, munguva ino dzinoera ndinokutarisa, ndinokubata uye ndinokusunga, Uye neropa rakadeurwa naIshe wedu Jesu Kristu, moyo wake wakatsemuka.
Baba vangu vandinoda, Mwanakomana neMweya Mutsvene, imi muno mumwe Mwari wechokwadi, bvumidzai muvengi wangu kuti auye azviisa pasi uye achiri, sekuda kwaakaita Mwanakomana wenyu anodiwa pamuti.
Ndiri kuona muvengi wangu achiuya, Nemavoko ake asina kusimba uye akafukidzwa meso, Uye kana akandikumbira neropa rako rakaropafadzwa, handife ndakamupa iye.
Ini ndinokukumbira iwe ishe wangu mukuru kuti uuye kwandiri, nekutendeuka uye uzvidire patsoka dzangu, utonge, wakundwa uye unononoka, kuti umukunda kubudikidza nesimba rako guru.
Kana muvengi wangu akauya kuzonditongesa chinhu, tonga ishe wangu uye usamurega, kana achida kunditora, arambe iye chero mutadzi waangave naye. Wangu anodikanwa Jesu Kristu, segwayana muchave mandiri, nekuti kana muvengi wangu achiona kuvapo kwangu, zvakaipa zvese zvinondishuva, zvinodzoserwa kwaari.
Kana iwe uchida kudzora vavengi, uyu ndiwo munyengetero wegwayana rakapfava.
Chese chinhu chinoba runyararo rwedu, chinotinetsa, chinotiodza mwoyo kana kutiita kuti tinzwe kusachengeteka mamiriro ezvinhu apo munamato uyu unogona kutiita kuti titangezve kudzora pfungwa dzedu uye rugare rwedu rwemukati.
Kuve nekumanikidza pamusoro pemamiriro ezvinhu anogona kusimuka nevaya vese vakazvizivisa vavengi vedu kunogona kuita musiyano wakawanda mumhedzisiro yemamiriro akadaro.
Vangave vavengi vedu kana nhengo yemhuri.Munamato uyu une simba unozotibatsira kuchengetedza zvinhu murunyararo isu uye nemunhu wese.
Chero mamiriro ezvinhu.
Nenzira imwecheteyo, izvo zvakaipa izvo zvakaipa izvo vavengi vedu vanokanda kuburikidza nekuvengana uye chigumbu zvichachengetedzwa kure nepatinogara.
Kuchenesa dzimba dzedu nemabhizinesi kubva kune chero yakaipa maitiro kwakakosha kuchengetedza kutonga pane zviitiko uye zvisarudzo zvinotenderera zvinotenderera vavengi vedu.
Munamato wegwayana nyoro remukuru
Kana iwe uchida kudzikamisa nekuita tenzi wako, iwe unogona kunamata chero chirevo pamusoro. Iwe unongo fanirwa kutsiva zita rako.
Vepamusoro pedu vanogona dzimwe nguva kuita hupenyu hwedu hushoma.
Muzhinji, kusiya basa haisi sarudzo inofanirwa kufungwa nezvayo uye panguva idzi ndizvo zvinokurudzirwa kuita izvi munamato kuitira kuvhiringidza maboss edu uye nekudaro kudzikisira kumanikidzwa kwebasa.
Aya mamiriro ebasa anowanzoanzwika kumba uye munzvimbo dzose dzatiri uye zvakafanira kuti isu tizvisunungure kubva kune yakaipa iyi vibrations vasati vakonzera chero kukuvadza kune mumwe munhu ari pedyo.
Kutenda, mutoro uye pamusoro pezvese zvakanaka zvinangwa zvinofanirwa kuve injini yedu yekuita chero munamato nekuti ipapo ndipo chete patichawana mhinduro yatinoda.
Chinhu chakakosha ndechekuti munamato wegwayana nyoro wakanamatwa nekutenda kwakawanda uye nekutenda kwakawanda mukati memoyo wake.